INCUBATOR JANOEL 42 SI TOOS AH: DIB-U-EEGIS, SHARRAX KU SAABSAN ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Janoel 42 Soo koobida qandaraaska ukunta
Breeders ayaa soo bandhigay tiro badan oo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee lakabyada, laakiin, nasiib daro, ma aha dhammaan digaagga ee jinsiga ukunta ayaa sii haysan dareenka hooyada. Tusaale ahaan, digaagga Forvock waxaa lagu gartaa wax soo saar wanaagsan, laakiin waxay leeyihiin gebi ahaanba dareen aan lahayn. Sababtan awgeed, beeralaydu waa in ay sameeyaan naas-nuujintan oo aan sameyn karin iyada oo aan kobcin lahayn. Halkaan waxaa ku jira gargaar ah nooca tooska ah Janoel 42. Qodobkani, waxaan tixgelineynaa sifooyinka ugu muhiimsan ee qalabka, faa'iidooyinka iyo faa'idooyinka, iyo sidoo kale talaabooyinka tallaabo tallaabo ee la shaqeynaya.
The Janoel 42 Incubator waxaa ku jira qalab gawaarida ah. Waxaa badanaa lagu magacaabaa "Shiine" sababtoo ah nooca Janoel ee laga sameeyay Shiinaha, laakiin xafiiska designka iyo shirkadda lafteedu waxay ku yaalaan Talyaaniga. Kuleylaha waxaa loogu talagalay in lagu dhejiyo ukumo kala duwan oo kala duwan - laga bilaabo digaagduur ilaa goose iyo turkey.
Kobcinta la tixgeliyaa waxay u ogolaataa in la yareeyo faragelinta aadanaha:
Waxaa lagu qalabeeyaa dareeraha heerkulka oo leh ukunta tooska ah.
Muuqaalku wuxuu fududeeyaa horumarinta qalabka wuxuuna ku yaalaa dusha sare ee daboolka.
Bacaha gaarka ah ee digsiga waxay kuu oggolaanayaan inaad ku shubtid biyaha, halka laga ciribtirayo baahida loo qabo furidda daboolka.
Muuqaalkan qaab-dhismeedka wuxuu bixiyaa shuruudaha ugu wanaagsan ee ukunta.
The Janoel 42 Incubator waxay leedahay shandad u adkeysi leh qalab kuleyliye oo wanaagsan iyo tamarta tamarta-badbaadisa, waxayna leedahay adeeg nololeed oo dheer marka loo eego kuwa ka shaqeeya kuwa kale ee wax soo saaraya.
Waxaa ku jira buug ku qoran Ingiriisi, iyo iibinta waddamada post-Soviet-ka, waxaa sidoo kale jira buug gacmeedka Ruush ah iyo xasuus qor ah.
Waa muhiim! Ku dhajinta ukumaha ku jira masawirada waxaa loo samayn karaa labadaba iyo si siman. Si kastaba ha noqotee, xagasha wareegga isbeddelka: si loo rakibo rakibid, saxaaradu waxay wareegaysaa 45°, iyo si toos ah - ilaa 180 °.
Miisaanka culeyska 2
Qiyaasaha, mm 450x450x230
Isticmaalka awoodda ugu badan, W 160
Isticmaalka awoodda korontada, W 60-80
Xagal qabasho, ° C 45
Qalabka xasaasiga ah, ° 0,1
Awoodda ukunta, pcs 20-129
Garanti, bilooyin 12
Fiiri faahfaahinta farsamooyinka casriga casriga ugu fiican.
Kombiyuutar wuxuu leeyahay 5 baakidh oo ay suurtogal tahay in la hirgeliyo:
20 ukun goose.
Si loo dhigo ukumaha digaaga iyo qajaarka, sheyga ayaa bixiyay qaybo gaar ah., kuwaas oo lagu rakibay grooves on saxaarada - tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si adag u dhigo qadar weyn oo ah wax.
Ma taqaanaa? Tirooyinka ku jira magaca Janoel 42 thonguber micnaheedu waa tirada ugu badan ee ukunta ee la dhigo qalabka.
Tilmaamahan waxaa lagu qalabeeyaa dareeraha heerkulka kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto adeecada heerkulka maskaxda. Xakameyaha kuleylku wuxuu ku yaallaa daboolka maskaxda wuxuuna muujiyaa akhrintiisa on bandhigga isagoo sax ah 0.1 ° C. Waxaa sidoo kale jira isku xiraha mashiinka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad bedesho basaska jihooyinka kala duwan 45 ° 2 saacadoodba. Ku dhowaad dhammaan qalabka gaasku waa bir bir ah, marka laga reebo laba, iyada oo si fiican u awood u leh inay u adkaysato culeyska, laakiin looma difaaci karo kulaylka inta lagu jiro hawlgalka.
Sida qaybta kuleyliyaha, kuleyliyaha-gabbadlaawe leh oo leh raadiye weyn ayaa loo isticmaalaa. Daboolka waxaa ku jira fan ah seddex daboolaya, kaas oo bixiya wareegga hawada oo dhan wareega wareegista - sidaas awgeed heerkulka isku dhafan ee dhammaan ukumaha. Laga soo bilaabo bannaanka daboolka, soo-saaraha ayaa bixiyay damper, kaas oo inta lagu guda jiro geedi-socodka wax-qabadku wuxuu bixiyaa socodka hawada qalabka. Ceel isku mid ah ayaa sidoo kale ka jira qaybta hoose ee kuleylaha, laakiin maaha mid u dhow sida marka loo eego midka sare.
Marxaladaha kala duwan, qiyamka qoyaanka kala duwan waa in lagu hayaa qolka. Taasi waa sababta loogu talagalay naqshadda qalabka, soo-saaraha ayaa bixiyay joogitaanka laba duub oo kala duwan oo biyo ah oo leh meelo kala duwan. Sidaa darteed, inta lagu guda jiro muddada ugu horeysa ee burinta, uurjiifku si siman u kululaato, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo caanaha nudaha 55-60%, marxaladda dhexena waxaa la yareeyaa 30-55%. Si kastaba ha noqotee, dayactiridda qoyaanka (65-75%) ee marxaladda ugu dambeeya waxay keenaysaa in ay si degdeg ah uga soocaan misigta. Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in la isticmaalo taangiyada kala duwan ee marxaladaha kala duwan: marxaladda koowaad, weel wayn oo U-qaabeeya ayaa la isticmaalaa, iyo marxaladda "qalajinta", mid yar. Si loo hubiyo huurka ugu badan, taangiyada labadaba waa la shubay. Markaad isu beddelayso mid kale, ma jirto baahi loo qabo in la daadiyo biyaha haray, maaddaama ay si fiican u dillaacday sababtoo ah kuleylka laysku qurxiyo ee aqalka kululaynta.
Shaashad yar oo ku taal qeybta hoose ayaa muujinaysa heerkulka aqalka kululaynta. Marka loo soo jeesto, LED guduud waxay kor ujirtaa shaashadda, kaas oo ogeysiiyay isticmaalka bilawga qalabka, kaas oo la socdo isbeddel heerkulka bandhigga. Samee heerkulka loo baahan yahay si loo xakameeyo (waxayna ka duwan tahay nooc kasta oo ukun ah) adigoo isticmaalaya badhanka Set. Marka la cadaadiyo, LED ayaa illaa, taas oo muujinaysa in qalabku galey habka barnaamijka. Markaad riixdo + iyo furayaasha, waxaad sameyn kartaa heerkulka la doonayo.
Shirkadda ayaa bixisay suurtagalnimada isbedel qotodheer oo lagu sameeyo masraxa. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad hoos u dhigtaa badhanka Setka in ka badan 3 ilbiriqsi, ka dib markii ay codadku ka muuqdaan xarfaha Laatiin ah. Waxaad bedeli kartaa inta u dhaxaysa qiyaasaha adiga oo isticmaalaya + iyo - badhanka, iyo badhanka Set ayaa loo isticmaalaa si aad ugu soo baxdo oo aad uga baxdo. Isticmaalayaasha ayaa dejin kara xaddiga kuleyliyaha (HU) iyo kuleylka (HD), waxaad sidoo kale sameeyn kartaa heerka hoose (LS) iyo xadka heerkulka sare (HS) iyo hagaajinta heerkulka (CA).
Markaad doorato LS code, waxaad samayn kartaa xadka heerkulka hooseeya: sida waafaqsan goobaha warshadaha, waa 30 °. Haddii aad dejisid heerkulka LS ee 37.2 °, waxaad naftaada ka ilaalin kartaa faragalinta aan loo baahnayn, taas oo ah, qofna ma dejin doono heerkulka kuleylka ee ka hooseeya tan. Waxaa fiican in la sameeyo xadka heerkulka sare (HD) gudaha 38.2 ° haddii aad u isticmaasho ukunta digaaga ee loo yaqaan 'incubation'. Xakamaynta heerkulka waxaa lagu dejin karaa inta u dhexeysa -5 iyo +5, si kastaba ha ahaatee, xaaladaha shaybaarka, qalabka ugu fiican waa -0.9.
Incubator Janoel 42 wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan marka loo eego kuwa kale ee isku dhafan:
Qalabka geeddi-socodka buuxa;
nidaamka biyaha ee habboon;
kuleylka kuleylka ee kuleylka kuleylka;
miisaan yar iyo cabbir, taas oo ay ugu wacan tahay suurtagal ah in lagu qaado qalabkan si sahlan;
qalabka daggan ee qalabka;
Waa suurtagal in la joojiyo wareegga sheyada - si fudud uga saar fiyuusyada.
Ka akhri faa'iidooyinka iyo khasaariinta noocyada noocan oo kale ah: Isbaarada "Egger 264", "Covatutto 24", "Kvochka", "Neptune", "Blitz", "Ryabushka 70", "Little Bird", "Ideal hen".
Isticmaalayaal badan ayaa xusay naqshad si fiican u fikirka ah oo fududeynaya nadiifinta iyo u ogolaanaya kaydinta is haysta ee dhammaan qaybaha qalabkan. Waa in la ogaadaa joogitaanka digniin la maqli karo oo ogeysiinaya is-beddel ku yimaada hawlgalka qalabka. Dhibaatooyinka noocaan ah waa:
la'aanta awood dib-u-gurasho ah oo ka ilaalin karta qalabka korontada ama haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah;
qoyaan la'aan, sidaas darteed heerka biyaha ee weelasha waa in la hubiyaa maalin kasta;
Xadhkaha dheeraadka ah ee dareeraha heerkulka badanaa wuxuu la xiriiraa ukumaha. Waa inaad sidoo kale hubisaa in fiilooyinka aysan ku xirneyn biyaha ka soo baxa gawaarida.
Ma taqaanaa? Ukuntada leh laba xabbo oo aan ku habbooneyn chicks, iyo digaagga mataan ma jiraan. Tan waxaa lagu sharraxay xaqiiqda ah in aanay jirin meel ku filan oo laba shillin ah oo hal ukun ah.
Marka cimilada qabow ama marka awoodda la damiyo, kiis caag ah ayaa si deg deg ah u qaboojiya. Gaadiidka dheeraadka ah ee masaafada loogu talagalay laguma talin karo, maadaama ay tuubadu waxyeeleyn karto inta lagu jiro gaadiidka.
Isticmaalka saxda ah ee Janoel 42 incubator waa mid aad u muhiim ah, maadaama aad heli karto natiijo fiican, kaliya adoo raacaya talooyinka soo saaraha. Si sahlan loo isticmaalo, Shirkadda Janoel waxay ku jirtaa xasuusta, kaas oo sharaxaya tilmaamaha tallaabo tallaabo ah oo lagu shaqeynayo qaabka lagu sharraxay.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka Janoel 24 kumbuyuutar.
Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, waa inaad doorataa meesha meesha lagu rakibayo. Fikrad ahaan, booska soo socda ee korantadu waxay ku haboon tahay, waxna laguma dari karo korontada. Marka aad isku xireyso, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in faylka aan la buuxin iyo in la yareeyo khasaarihii korontada lama filaan ah. Ha u soo bandhigin masraxa qoraxda, iftiinka qoraxda, ama kiimikooyinka waxyeellada leh ama sunta kale. Waa in la xusuustaa in geeddi-socodka soo-qaadidda uu ku dhici karo qol aan heerkulku hoos udhicin +25 ° C. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin ku habboon si loo ilaaliyo qalabka xagasha heerkulka.
Ka hor intaanad bilaabin qalliinka, dhammaan nidaamyada waa la hubiyaa: haddii maskaxdu ay wareegto, iyada oo la adeegsanaayo heerkulbeegga, saxnaanta hawlgalka xasaasiyadda heerkulka ayaa la hubiyaa. Jidhka waxaa lagu baarayaa dildilaacyo iyo jajab. Baaritaanka ka dib, saxan mesh ayaa lagu rakibay qaybta hoose ee qolka tubaakada, iyo tareemadu waxay ku xiran yihiin wareegga guuritaanka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waxaa lagu kala saari karaa qaybo caag ah (oo loogu talagalay ukumaha digaaga iyo qoryaha). Naqshada wareega ee kor ku xusan. Hadda waxaad aadi kartaa imtixaanka kambaska.
Ka hor inta aan la saarin qalabka shaqada, waxaa lagama maarmaan ah in la tijaabiyo xashiishka ilaa 12-24 saacadood. Marxaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ku xirto mishiinka oo aad hubiso hawlgalka dhammaan nidaamyada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon inaad xusuusato inaadan arki doonin shaqada mashiinka aragtida, maadaama uu aad u gaabisanyahay mana jiraan wax isbeddel muuqaal ah gudahood 5 daqiiqo gudahood. Si aad u hubiso, waxaad isticmaali kartaa serifs, oo ay ku qoran yihiin calaamadeeyaha, iyo wakhti go'an, ka dib iska hubi jaridda saxda ah ee calaamadaha cayiman. Tani waxay dejisaa heerkulka, iyo biyaha waxaa lagu shubaa saxanka. Waxaa lagama maarmaan ah in la riixo badhanka Set iyo iyadoo laga caawinayo + iyo - deji heerkulka loo baahan yahay. Marka ugu horeysa ee aad soo celiso tilmaamayaasha heerkulka waxay yaraan karaan - ha walwalin, sababtoo ah caqligani waxaa barnaamijka soo dejiya soo saaraha. Waxay si tartiib ah u dhaqmaan, iyo geeddi-socodka hawlgalka ee hoos u dhigta heerkulka, kontoroolayaasha waxay soo jeedin doonaan qaybta kuleylka, iyo qollada kulubka ayaa kululayn doona.
Ka dib markaad hubiso nidaamyada oo dhan waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo maskaxda. Tan waxaa lagu sameyn karaa qoyan qoyan. Xalalka wanaagsan ee nuucyada ama daawada potassium ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa.
Ka hor intaan la dhigin ukumaha, furaha kuleylku wuxuu xiraa oo xiraa daaqada sare ee hawada sare, wuxuu dejiyaa heerkulka loo baahan yahay wuxuuna u oggol yahay qolka kululaynta inuu kululeeyo.
Waa muhiim! Heerkulka kululeynta digaaggu way kala duwantahay nooc kasta. Tusaale ahaan, digaagga, waa 38 ° C, qufac - + 38.5 ° C, berriga - + 38.3 ° C, iyo for ducks and turkeys - + 37.9 ° C.
Hibo u yeelashada ukunta cusub. Ku soo ururi 5 maalmood gudahood: Sidaa awgeed, suurtogalnimada nucleerka embriyaha waa 4-7% marka loo barbar dhigo ukumaha, nolol shelf oo ay ka badan tahay 5 maalmood. In habka loo ururiyo heerarka ugu wanaagsan ee lagu kaydin karo ukumaha waa in ay ahaataa inta u dhaxaysa 12-15 ° C. Ukuntu waxaa la dhigaa qol diirran oo kulul. U adkee dhinacyada: Xaaladdani waxay ku daydaa xaaladaha dabiiciga ah ee ukunta. Ka dib markaad calaamadeysid, ha ilaawin inaad calaamadiso taariikhdaas oo ah bilowga xilliga xaddidaadda - tani waxaa la sameeyaa si aanad u seegin xilligii nasashada ee chicks.
Ka hor inta aan la dhigin ukumaha, waxaa habboon in nadaafad ah oo keliya ukumaha laftiisa laftooda, laakiin sidoo kale dhiirigeliyaha.
Weelka dareeraha ku shub 300 ml oo biyo ah. Markaad ku shubeyso weelka U-qaabeeya, qoyaanka gudaha aqalka kululaynta waa ugu yaraan 55%. Ka dib markaad ukumo xirto daboolka oo fur furka hawo-qaadista, adoo siinaya hawo cusub oo hawo leh.
Inta lagu jiro xilliga dhalidda ee noocyada kala duwan ee shimbiraha, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xaaladaha heerkulka kala duwan. Tusaale ahaan, for digaagga, heerkulka ugu fiican waa +38 ° C, laakiin tani waa qiimaha celceliska muddada dhan. 6da maalmood ee ugu horreeya waxa ugu fiican in la cabbiro heerkulka +38.2 ° C, iyo min 7 ilaa 14 maalmood waxaa lagu dejiyaa +38 ° C
Nasiib darro, qaabkani tusaala-yaashu maaha qalab qoyan, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad maalin kasta ku shubtid biyaha, laakiin ha ku shubin wax ka badan 100-150 ml mar.
Marxaladda diyaargarowga loogu talagalay ukunta daadinta (maalinta 16-aad) waxaa lagama maarmaan ah in heerkulka loo dhigo gudaha + 37.2-37.5 ° S (digaagga) iyo buuxi weelasha biyaha. Xaaladdan, qoyaanka qoyaanka ahi waxay udhaxeeyaan 65-85%. Saddex maalmood ka hor inta aan la tufin, ukunta ayaa la joojinayaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sidii loo kobcin lahaa digaagga, ducklings, poults, goslings iyo boodhka ka soo kiniisada.
Si aad tan u samayso, ka saar tuubooyinka la marin karo ee ka soo kobcinta, oo ukumo ku dheji saxan mesh ee hal lakabka.
Faa'iidooyinka ku jira jilitaanka Janoel 42 waa magdhow qiimo leh. Sidaas darteed, suuqa adduunka waxaa laga iibsan karaa kaliya 120-170 doolar, suuqa Suuqa Ruushka wuxuu u dhexeeyaa inta u dhaxeysa 6,900 iyo 9,600 roon. Suuqa Ukrain ayaa bixiya qalabkan loogu talagalay 3200-4400 UAH. ee gabal.
The Janoel 42 Incubator waa doorashada ugu fiican ee beer yar yar, ku haboon nooc kasta oo digaag ah. Waxtarkeeda waxaa soo saaray dad badan oo isticmaala qalabkii su'aasha sanado badan. Kulubka noocan oo kale ah wuxuu siinayaa dhalid 70-90%. Kahor qalabka guriga, wuxuu ku guuleystaa tayada, iyo ka hor Talyaaniga - qiimaha.
Ma taqaanaa? Waqtiga ugu wanaagsan ee la dhigo ukunta waa 18:00 ama ka dib. Iyada oo this tab, chicks ugu horeysay u muuqdaan subaxdii, iyo inta kale - maalintii oo dhan.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala, kuwa iswadaarsiga ah ee la aqbali karo oo awood u leh in ay isticmaalaan xoogaa ka yar. Tusaale ahaan, kuleyliyaha Hoos-u-dhalashada wuxuu cunaa kaliya 50 watts. Iyo, tusaale ahaan, "Cinderella" wuxuu leeyahay biyo aad u ballaaran oo la barbar dhigo Janoel. Kuwa doorbidan raqiis, laakiin isla markaa la dooran karo, isku day inaad bixiso doorbidada BI-2: kaniubadani waxay haysaa 77 ukumo, qiimaarkuna waa 2 jeer ka hooseeya Janoel 42, laakiin dareenka heerkulka badanaa wuxuu muujiyaa xog khalad ah maalmaha ugu horreeya isticmaalka. Marka aad soo iibsaneysid Janoel brand incubator, waxaad ku kalsoonaan kartaa tayada golaha iyo waxtarka qalabka. Waa in la ogaadaa in horeyba u dhiganta 80% ee isticmaalayaasha isticmaala natiijada 32-35 ukumood oo ah 40, oo ah 80-87.5% waxtarnimada. Isticmaalka, tusaale ahaan, qandaraasle BI-2 wuxuu bixiyaa 70% oo keliya.
Si sahlan, u shaqeyn iyo suurtogalnimada waxay suurtogal u tahay in la isticmaalo Janoel 42 kuleylaha xitaa beeralayda hibada leh ee beer yar yar sida kaalmo aad u fiican ee helitaanka caruusadda shimbiraha.
Fikradayda, naasku waa fiican yahay. Joogto heerkulka, hawada kulul ayaa ceyrsaneysa qaboojiyaha, qoyaanka yar ee qiiqa kuuskuuban (tani waxay dhacdaa markaad ilowdo biyaha), ukumaha ayaa bamgareynaya baayacmushtarka, marka aan loo baahnayn, afboolka waa la deyn karaa. Darbiyadu waxay leeyihiin hufnaan, sidaas darteed chicks ayaa kululayn kara ka dib maalmo dhowr ah ka dib markaad hirgeliso. Waa ku habboon tahay in la daryeesto - si loo dhaqo ka dib marka la isticmaalo. Laakiin waxaa jira cillad. Ninkani wuxuu arkay. Ilaa hadda sida aan xasuusto, dhibtu waxay ku jirtaa tilmaame leh dareeraha diirran. Waxa uu ku jiraa xargaha adag ee ka soo baxaya daboolka furka, kaas oo "maskaxaha" lagu rakibo, oo si toos ah u jiifa ukunta. Waxaay hoos u dhigi kartaa hoos, hoosta saxan ee saxan biyo. Ninkeyga ayaa iiga digay inaanan taabto - waxay ahayd khatar. Oo waxay u muuqataa inuu isagu qaawan yahay. waxay heli kartaa shoog koronto. Anigu ma aanan taabanin nafta caag ah podvaniv markii ugu horeysay ee caag ah. Bvstro ayaa la duubay. Haatan ma dhicin. Iyadoo aan fasax aheyn, wuxuu ka shaqeeyey Abriil ilaa Agoosto. Ku soo dheji warqad. Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego warbixinta gabagabada, laakiin ma sameyn karo. Xagaagan waxaan haystaa dhammaan qodobbada - seerayaasha. Xitaa dhammaan SURO-yaddayda ayaa siiyay gabagabo hoose. Xitaa shimbir yar oo yaryar. Waxaan iibsaday bishii Abriil ee Aliexpress. Waxaan bixiyay qiyaastii 7 kun oo doolar. Inta badan lacagta ayaa la diraa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kufsi 2019